Ivenkile yeApple eSingapore, beta 2 macOS 10.12.6, iiMacBooks ezintsha zeWWDC nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Ivenkile yeApple eSingapore, beta 2 macOS 10.12.6, iiMacBooks ezintsha zeWWDC nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UJordi Gimenez | | Izaziso, Iikhompyuter zeMac
Sikude nje iiyure ezimbalwa ukusuka ekuqaleni eyokuqala intetho ephambili ka-Apple yalo nyaka ka-2017 Kwaye inyani kukuba sonke ngokwenene sifuna ukuba le nto iqale ngokusemthethweni. Kodwa ngexa oku kungenzeki sizokonwabela intsalela yangeCawa kwaye ngaphezulu kwako konke siza kubona ezona ndaba zibalaseleyo zeveki. Kule meko, ezinye zazo ngokucacileyo zibhekisa kumsitho we-Apple ngomso, kodwa ayinakuphepheka ukuba ayizukuvela okoko amarhe malunga nokuboniswa kwe-Apple kunye nokuba zeziphi iimveliso ezinamahemuhemu zixhomekeke ngokupheleleyo kubathandi beMac.
Ngokucacileyo kule ntetho iphambili yonyaka into elindelweyo yisoftware, oko kukuthi, uphuculo kwiMacOS, iOS, iwOSOS kunye neTV, kodwa sele icacile ngamahemuhemu kunye nokuvuza ukuba iApple inokwazisa iiMacBooks ezintsha, i-iPad enkulu kunye nesithethi esikrelekrele ... Kodwa masikushiye oku okomzuzwana kwaye sihambe nezinto eziqaqambileyo zeveki.
Ivenkile yase-Singapore yokuqala, Orchard Road, ivula iingcango zayo kubasebenzisi beApple. Le yinto ebeqhelekile kwaye I-Apple iya isanda ineevenkile ezininzi kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu lunqwenela ukuba lusondele kwaye lusondele kumakhaya ethu.
Kwelinye icala sine Isishwankathelo esincinci malunga nento esinokuyibona kwiWWDC Ngaphandle kwamarhe athi avuza iiyure kamva. UApple ufuna ingcaciso ephambili kunye nabasebenzisi nabo, ke ngethemba lokuba yonke into abayibonisayo inomdla.
Inguqulelo yesibini ye-beta ye-macOS Sierra 10.12.6 Kusezandleni zabaphuhlisi kwaye oku kuthetha ukuba siza kuba neenguqulelo ze-beta zale nkqubo kude kube semva kweWWDC ngokuqinisekileyo. Kwezi nguqulelo zokugqibela sizama ukushiya eyona ilungileyo ngokuhambelana, iimpazamo kunye nokunye, ukuze kungabi ukuyichukumisa kwikamva. Ngokucacileyo i-beta 2 ye-iOS, ii-watchOS kunye ne-tvOS nazo zakhutshwa.
Okokugqibela asinakuyeka ukuthetha ngamahemuhemu malunga entsha IMacBook Pro, iMacBook Air, 12 ″ iMacBook, I-10,5-intshi ye-iPad Pro kunye nesithethi esinobuqili esithi Bloomberg sithi siyakusazisa ngomso. Nangeyiphi ndlela Siza kugubungela bukhoma kwiwebhu Ukwabelana nani nonke oko u-Apple asibonisa kona ngomso ngo-19: 00 ebusuku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ivenkile yeApple eSingapore, beta 2 macOS 10.12.6, iiMacBooks ezintsha zeWWDC nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Yenza ii-invoyisi zobungcali nge-Invoice Mate ye-Mac, yasimahla okwexeshana
Imouse yakho yobuGcisa nayo ifanelwe kukhuseleko olongezelelweyo ukuba uyayikhupha ngaphandle kwendlu